Uru nke JCOP4 usoro Java kaadị (J2R110|J3R110|J2R150|J3R150|J3R180) na ubi nke Electronic ID kaadị
J2R110|J3R110|J2R150|J3R150|J3R180 bụ JCOP4 usoro Java kaadị bụ ihe ọzọ na ọnụ ọgụgụ kasị elu ọrụ mgbe J2A, J3A, J3D, J3H usoro. Iji hụ na elu nche na elu arụmọrụ, na data nchekwa ikike na-ụba, Na Flash mgbawa, mgbawa nke Mgbakọ na-agba bụ ngwa ngwa na ndị ọzọ mụ. Tupu J3H usoro Java (yana idobe okirikiri), niile eji EEPROM ibe, and after the J3R …
ECB Onya ARO, Allegedly Ripple Instant Payment Service Last Friday, na European Central Bank (ECB) ulo oru mbụ ozugbo ugwo ọrụ ARO ekpuchi 19 so n'Òtù nke euro na mpaghara, na-enwe olileanya na-ndú na mobile ugwo na Europe na ọrụ a, na na ọtụtụ technology Refeyim na US na Asia. Ọgụ ka a ahịa. This …
Akwado NFC ịkwụ ụgwọ, chips and label manufacturer directly benefit In recent years, China UnionPay na telecom rụọ na NFC mobile ugwo banyere na-aga n'ihu mgbalị, duru NFC NR nke a mma ahịa atụmanya na industry.Several ezigbo ihe maka ịkwa NFC ugwo, ụlọ ọrụ analysis, NFC mgbawa na ndị ụlọ ọrụ yinye na labelụ emepụta na-erite uru kasị ozugbo. “First NFC mobile payment …
Page 1 nke 11